China Concrete Mixing Pump Truck Used Slewing Ring Bearing စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Wanda
Concrete Mixing Pump Truck တွင် အသုံးပြုထားသော Slewing Ring Bearing
ကွန်ကရစ်ရောစပ်ပန့်ထရပ်ကား၊ boom ပန့်ထရပ်ကား၊ မိုဘိုင်းပန့်ထရပ်ကား၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုထိန်းချုပ်ရေး မိုဘိုင်းပန့်ထရပ်ကား စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပန့်ထရပ်ကားအမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ဤပန့်ထရပ်ကားများသည် အလွန်အရေးကြီးသော ဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် ခွဲ၍မရနိုင်ပါ။slewing လက်စွပ်ကျမမှာ
ဟိslewing bearingအတွင်းလက်စွပ်၊ အပြင်လက်စွပ်နှင့် လှည့်ပတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းသုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။အကြီးကြီးတွေကို တပြိုင်နက် သယ်လို့ရတယ်။axial force၊ radial force နှင့် အချို့သော tilting moment.၎င်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက် လှိမ့်ကွင်းများတွင် လှည့်စားပွဲ သို့မဟုတ် ကိုယ်ထည်ဘောင်ပေါ်တွင် အသီးသီး ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော ဘောလီများ ပါရှိသည်။
ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်းကောင်းslewing bearingမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အတွေ့အကြုံနှင့် တွက်ချက်မှုများအရ ကွန်ကရစ်ပန့်ထရပ်ကားကို ကျွန်ုပ်တို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ရွေးချယ်ပါသည်။rotary စားပွဲ slewing bearingပိုကြီးသော axial load နှင့် tipping moment ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။Turntable slewing bearings များယေဘူယျအားဖြင့် နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။လူပျို အတန်းဘောလုံးslewing bearingနှင့်လူပျို အတန်းလက်ဝါးကပ်တိုင်roller slewing bearing.
Xuzhou Wanda က လဲလျောင်းနေပါသည်။ပေးထားသည်။slewing ဝက်ဝံပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ နာမည်ကြီး ပန့်ထရပ်ကားထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်။လိုအပ်ရင်slewing ဝက်ဝံပန့်ထရပ်ကားများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ယခင်- AWP (လေကြောင်းအလုပ်ပလပ်ဖောင်း) အတွက် XZWD slewing bearing
နောက်တစ်ခု: Truck Crane သည် Slewing Ring Bearing ကိုအသုံးပြုသည်။
pump truck သည် slewing ring ကိုအသုံးပြုသည်။
XZWD အတန်းဖော်ဘောလုံးကို ဂီယာဖြင့် သွယ်လျှောသော လှည့်ပတ်ခြင်း...
XZWD single row ball slewing bearing turntable...